MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxwaynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Maxamed [Farmaajo] ayaa wuxuu Telafoonka uu kula hadlay dhigiisa Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle, iyaga oo kawada hadlay isbedaladda Geeska Afrika.
Labadda masuul ayaa arrimaha ay isla soo qaadeen waxaa qayb ka ah dadaaladda dib loogu soo celinayo cilaaqaadka Jabuuti iyo Eritrea oo ay dowladda Soomaaliya kaalin fiican ka qaadaneyso.
Mahad-naqa gaar ah ayey Farmaajo iyo Geelle iska siiyeen doorka ay Soomaaliya ka qaadatay waan-waanta socota, waxayna tilmaameen muhiimadda ay leedahay in gobolka colaado ka fogaado.
Todobaadkan ayey ahayd markii Wasiiro arrimo dibadeedyadda Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea ay gaareen magaaalo madaxda Jabuuti, halkaasoo ay kulan la yeesheen madaxda dalkaas.
Jabuuti iyo Eritrea ayaa kulankaasi kadib kala saxiixday heshiis horudhac u ah soo celinta cilaaqaadka labadda dal, kuwaasoo tan iyo sanadkii 2007-dii ka dhaxaysay xurguf salka ku haysa Dhul xuduudka ku yaala.
Heshiiska ay kala saxiixdeen Labadaan dal waxaa si xoogan usoo dhaweeyay Ururka Midowga Afrika, iyo Mucaaradka Jabuuti, kuwaasoo ku baaqay in la adkeeyo nabadda iyo xasiloonida gobolka.
Wadahadalka khadka Taleefonka ee labada Madaxweyne ayaa kusoo beegmay xilli maanta Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf uu qoraal Luuqadda Carabiga ku qornaa uga mahadceliyay Sacuudiga iyo Eithiopia doorkooda dhexdhexaadinta Eritrea iyo Jabuuti. [Halkan ka akhri warka].
Siyaasadda aan fadhin ee dhanka arrimaha dibada dowladda Federaalka ayaa la sheegay...
Farmaajo iyo Geelle oo si wadajir ah xariga uga jaray Safaaradda Jabuuti
Soomaliya 17.03.2019. 11:59
Villa Somalia oo wali ka aamusan jahwareerka Doorashada KG
Soomaliya 07.11.2018. 00:14